Molten Metals Liquid Lipstick နဲ့ ရွှန်းစိုအိစက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးများ ဖန်တီးလိုက်ကြပါစို့……. | CosmeticMyanmar
Home » Article » Molten Metals Liquid Lipstick နဲ့ ရွှန်းစိုအိစက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးများ ဖန်တီးလိုက်ကြပါစို့…….
Molten Metals Liquid Lipstick နဲ့ ရွှန်းစိုအိစက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးများ ဖန်တီးလိုက်ကြပါစို့…….
Htet Htet Tin Zar
ပျိုမေတို့ရေ ဒီတစ်ခေါက်တော့ နှုတ်ခမ်းဖူးလေးများထက် ရွှန်းစိုအိစက်တဲ့ အရောင်လေးများနဲ့ ကြွရွလှပ စေနိုင်ဖို့အတွက် Kevyn Aucoin အမှတ်တံဆိပ်က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Molten Metals Liquid Lipstick လေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Kevyn Aucoin ရဲ့ ဒီ Molten Metals Liquid Lipstick လေးတွေကို အရောင် ၆မျိုး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ အရောင် ၆မျိုးနာမည်ကတော့-
Rose Gold (နှင်းဆီရွှေရောင်)
စတဲ့ ထူးခြားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အရောင်လေးများနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Molten Metals Liquid Lipstick လေးတွေကို Moisture-rich formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ နှုတ်ခမ်းလေးသားလေးက ခြောက်ကပ်မနေဘဲ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးတဲ့အခါမှာလည်း ဆိုးထားမှန်း မခံစားရဘဲ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ High-pigmented ဖြစ်လို့ နှုတ်ခမ်းကို ရွှန်းစို တောက်ပစေပြီးတော့ တစ်နေကုန် ကြာရှည်ခံတဲ့ အလှအပကို ခံစားနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းသားလေးပေါ်မှာ ဆွဲနိုင်ဖို့ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Applicator လေးကလည်း ဆွဲချက်ချောမွေ့စေပြီး အသွားချွန်တဲ့အတွက် မိမိလိုရာကို အတိအကျဆွဲပေးနိုင်စွမ်း ရှိတာကြောင့် ပျိုမေတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Intense Look လေးရဖို့ဆိုရင်တော့ Molten Metals Liquid Lipstick လေးကို နှုတ်ခမ်းအလယ်မှာ အသာလေး ဖိပေးပြီး လက်သူကြွယ်လေးသုံးပြီး နှုတ်ခမ်းများမှာ ညီညာအောင် တပြေးညီ ဆွဲပေးနိုင်ပါတယ်။
Image Source – https://kevynaucoin.com/
အသားအရေမွဲခြောက်မှုကို ကာကွယ်တားဆီးပေးမယ့် Perfecting Pearls Anti Dullness MÉTÉORITES BASE
နှုတ်ခမ်းလေးများကို 2018 Colour of the Year နဲ့ ပုံဖော်ကြပါစို့.........